I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi kagesi wuhlobo lwesakhiwo sensimbi olungagcina ibanga elithile liphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa. Ngawo-1980, amazwe amaningi emhlabeni aqala ukusebenzisa amaphrofayli wensimbi ensimbi esakhiweni sombhoshongo lapho kwenziwa imigqa yokudlulisela ye-UHV. Imibhoshongo yensimbi yensimbi enamapayipi wensimbi njengoba impahla eyinhloko ivele. EJapan, imibhoshongo yensimbi yensimbi icishe isetshenziswe emigqeni nasemibhoshongweni engu-1000kV UHV. Bona ...
Ngawo-1980, amazwe amaningi emhlabeni aqala ukusebenzisa amaphrofayli wensimbi ensimbi esakhiweni sombhoshongo lapho kwenziwa imigqa yokudlulisela ye-UHV. Imibhoshongo yensimbi yensimbi enamapayipi wensimbi njengoba impahla eyinhloko ivele. EJapan, imibhoshongo yensimbi yensimbi icishe isetshenziswe emigqeni nasemibhoshongweni engu-1000kV UHV. Banocwaningo olunzulu ngobuchwepheshe bokwakhiwa kwezigxobo zamapayipi ensimbi.
Ukudweba kokuhlangenwe nakho kwangaphandle, amaphrofayli ensimbi wepayipi asetshenziswe ku-500kV Double Circuit Tower nakumbhoshongo wesifunda wesine embhoshongweni ofanayo e-China, okhombisa ukusebenza kahle nokuzuza kwawo. Ngenxa yokuqina kwesigaba sayo esikhulu, izici ezinhle zokuxineka ezinqamulelayo, ukucindezela okulula, ukubukeka okuhle nezinye izinzuzo ezivelele, isakhiwo sombhoshongo wensimbi sakhiwe kahle emigqeni yezinga lamandla kagesi ahlukahlukene. Ikakhulukazi, isetshenziswa kakhulu esikhaleni esikhulu sesakhiwo nakumbhoshongo wesakhiwo samandla asezindaweni ezisemadolobheni.
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komkhakha we-metallurgical waseChina, ukukhiqizwa kwensimbi enamandla kakhulu akusekho nzima. Ikhwalithi yensimbi yamandla aphezulu e-China ithuthukiswe ngokushesha nangokuqinile, futhi isiteshi sokuhambisa sesibushelelezi ngokwengeziwe, okunikeza ithuba lokusebenzisa insimbi enamandla amakhulu emibhoshongweni yolayini wokudlulisa. Kuphrojekthi yokuqala yocwaningo ka-750 kV wokudlulisa ulayini, i-Electric Power Construction Research Institute yombuso wamandla ombuso ifunde isakhiwo sokuxhuma esihlanganisiwe, inani lokuklama ipharamitha, amabholidi afanayo kanye nezinzuzo zezomnotho ezizotholakala ekusetshenzisweni kwensimbi enamandla amakhulu . Kucatshangelwa ukuthi insimbi enamandla amakhulu ihlangabezane ngokugcwele nezimo zokusetshenziswa embhoshongweni kusuka kubuchwepheshe nokusetshenziswa, futhi ukusetshenziswa kwensimbi enamandla amakhulu kungancishiswa Isisindo sombhoshongo singu-10% - 20%.
Langaphambilini 2018 Good Quality Wind Tower - Electric angle angle tower - Qiangli
I-engeli yensimbi yombhoshongo wensimbi Umbhoshongo wensimbi kagesi wuhlobo lwesakhiwo sensimbi olungagcina ibanga elithile liphephile phakathi kwabaqhubi abasekelayo kanye nezakhiwo zomhlaba kulayini wokudlulisa. Eminyakeni yamuva nje, ngokukhula okusheshayo komnotho wezwe, imboni yamandla ithuthuke ngokushesha, okukhuthaze ukuthuthukiswa okusheshayo komkhakha wombhoshongo wokudlulisa. Ngokwezibalo, imali engenayo yokuthengisa yomkhakha wokudlulisa umugqa wemboni ku ...
Isakhiwo se-Tube Steel, UMasipala Wezokuxhumana, Electric Angle Steel Tower, Prefab Steel Izakhiwo, I-Electric Angle Steel Towers, I-Angle Steel Power Transmission Tower,